SHAMBO SHAAMBO OO LOOGU TALAGALAY BISADAHA: DIB U EEGISTA QIIMAHA UGU FIICAN IYO QIIMAHA CELCELISKA EE RUUSHKA - GURI, GURI
Ka saar boogaha nadiifka ah! Shambo shaambo loogu talagalay bisadaha
Waqtiyada markaa si fiican loo yareeyo waxay awoodi karaan iibsashada iyo hagaajinta bisad inay aad u yaraayeen.
Hadda ma yartahay guri ama dabaq aan lahayn xayawaan dabacsan.
Muhiim ma aha nooca xayawaanka ah ee ay tahay - bac muggeed leh ama cuur aan caadi ahayn. Kaliya xayawaan furan ayaa u muuqday dhibaatooyin la xidhiidha dayactirka iyo caafimaadka bisad.
Calaamadaha boodada ee bisad
Ilaali bugaaga. Caadi ahaan waa xayawaan, xayawaan soo jiidasho leh. Haddii xayawaan waxay u dhaqmaan si aan caadi ahayn, cuncun badanaa, isku day inaad qaniinto wax ka baxsan dhogortaka dibna kuwani waa calaamad muujinaysa joogitaanka boodada "shaashadda".
Marka laga eego bisad nabarrada ayaa laga heli karaa maqaarka, isku-darka. Xayawaanku wuxuu u dhaqmaa si aan caadi aheyn, oo isku dayaya inuu dhulka ku foorarsado, wuu is-qabtaa. Marka la isku dhajiyo dharka xayawaanka rooga, granules mugdi yar ayaa ku dhici doona filimka la beeray. Si aad u hubiso in ay tahay, hoos u dhig dhibic biyo ah mid ka mid ah granules. Haddii granant la kala diro, biyaha ayaa casaan mugdi ah, ka dibna tani waa saxaraha boodada.
Hadda iibka waxaa jira daroogo badan si ay bisad uga hesho boodada. Kuwani waa dhibco kala duwan, buufin, dabaq, shaambo.
Codso xayawaanka xayawaanka ah, iyo sidoo kale wadarta dhabarka. Shirkadaha wax lagu dhufto ayaa sheeganaya in daroogadu ay saameyn ku yeeshay, wuxuu ilaaliyaa bisadaha 1.5-2.0 bilood. Si taxaddar leh u akhri sharaxaada iyo baakadka daroogada. Haddii wax shaki ku jiro, iibso iibsashada, waxaa jira fursad lagu helo been abuur.
Inta badan waxaa loo isticmaalaa in laga hortago caabuqa boodada. Xayawaanka xayawaankuna si dhammaystiran ayuu u nadiifiyaa, waa lagama maarmaan mudo 25-30 daqiiqo ah si looga hortago xayawaanka inuu leefleeyo dhogorta, haddii kale bisadu waa la sumeyn karaa. Kadibna u daadi diyaarinta diyaargarowga biyaha diirran. Isticmaalka saxda ah ee saxda ah, buufintu waa badbaado xataa xitaa ilmo.
Waxaa laga yaabaa in qalabka ugu caansan iyo inta badan loo isticmaalo. Nasiib darro, waxay leedahay cillado dhawr ah:
Maqnaanshaha isticmaalka xayawaanka uurka leh;
Xayawaanku uma baahna inay xirto qoryaha;
Wareerka aan fiicnayn ee qoryaha ilaa wakhti dheer;
Xumaan shakhsi ah, ilaa alopecia maqaarka hoostiisa hoostiisa.
Mid ka mid ah hababka ugu fudud uguna wanaagsan. Laakiin waxaa loo baahan yahay in la sameeyo waqti go'an, qiyaastii bishii. Sidaa darteed, waxaa wanaagsan in la isku daro qubaysiga xayawaanka leh daaweynta dambe ee dhogorta leh buufin. Wax yar oo dheeraad ah oo ku saabsan shaambooyada ayaa loo bixiyaa iibka.
Badanaa waxay ku yaalaan qalabka waraaqaha lagu bixiyo shaambada loogu talagalay bisadaha oo soo bandhigay badeecadaha shirkadaha "Celandine", "Phytoelite", "Mr. Kiss", "Barkadaha".
Shampoo waxay saameyn ku yeeshaan dulin-saarka, maxaa sababay dhimashadooda.
Daawada ayaa lagu heli karaa laba nooc, xayawaanka qaangaarka ah iyo kalluunka, dhalooyinka caag ah ee 220 ml. Qiimaha baakadka ee Russia waa kala duwan yahay gudahood 80-110 rubaar.
Muuqaal khaas ah waa wakhtiga loo marayo dhogorta dhirta.
Waa waa 5 daqiiqo halkii 10-15 ee shaambo kale.
Soo iibso shaamboo oo kaliya dukaamada khaaska ah ama farmashiyada xoolaha, si looga ilaaliyo iibsiga been abuurka.
Mid ka mid ah shamaca caanka ah ee warshadaha Ruushka. Halbeegga waxaa ku jira daroogo permethrinkaas oo ku uruursan maqaarka maqaarka iyo, marka qaniinyo, wuxuu keenaa neuromuscular paralysis ee dulin. Wixii xayawaan ah, daroogadu si buuxda uma dhibayso.
Waxaa laga helaa dhalooyin 200 ml ah. Qiime caadi ah waxay u dhaxeysaa 40 ilaa 60 rubi. Sababtoo ah walxaha fudud ayaa loo isticmaali karaa marar badan shaambo kale. Ma waxyeelo xayawaanka xayawaanka iyo ka qaybgalka bogsashada degdegga ah ee goobta qaniinyada.
Hada waxaa jira muuqaal kobcaya shaambooyo loo yaqaan "Leopard". Waxaa lagu kala saaraa qaabab badan oo la isku qurxiyo iyo joogitaanka saliidaha lagama maarmaanka ah ee shaandhada, taas oo ka hortagaysa dhogorta inay noqoto mid caan ah, xitaa bisadaha dheer-dheer.
Digniin: shaamboo oo ka kooban unugeeda lama magacaabi karo gebi ahaanba aan wax khasaare ah lahayn, markaa ka hor inta aanad codsan, si taxaddar leh u akhri tilmaamaha ku yaal baakadka sheyga.
Sida laga soo xigtay dib u eegista laga helo mulkiilaha caanuhu daroogo leh. Nidaamka waxaa ka mid ah, marka lagu daro sunta cayayaanka, ka soo saaro xawaashka daawada. Kordhinayaan caadadaada ee dheef-shiid kiimikaad ah. Waxay leedahay qalab aad u sarreeya markaad isticmaasho biyo kasta oo adag.
Shubo baakadeeyaha, 250 ml. Dareemaha ayaa lagu soo bandhigaa iibinta dukaamada khaaska ah iyo farmashiyada xoolaha. Qiimaha qiimihiisu wuxuu u dhexeeyaa 120 ilaa 150 rubuc.
Shambo marka laga reebo permethrin ku jira In uu ka kooban yahay cayayaanka kale. Waa fipronil.
Iyadoo loo marayo isticmaalka laba daroogo aad wax ku ool ah. Waxay ka kooban tahay walxaha ay ka kooban tahay ma xanuujin karo xuubka xayawaankaaga xayawaankaaga.
Sida laga soo xigtay codsiga aan loo qaybin sabab u ah da'da xayawaanka, iyo sidoo kale ku haboon eeyaha. Waxaa laga helaa 180 ml dhalooyin polymer ah, celcelis ahaan qiimaha 75-90 R..
Waa muhiim: Daaweyntu waxay hubineysaa burburinta boodada ee ku taal bisada, lakiin caymisku kama soo kaban karo guuldarada soo noqnoqota. Isticmaal habka looga hortago infekshanka boodada.
Shampoo waxay ka kooban tahay qayb ka mid ah horumarinta hal-abuurka ee dhakhaatiirta Swiss, ee maaha carqalad maqaarka iyo xuubka xuubka ee bisadaha.
Dareeraha ayaa lagu heli karaa dhalooyin 200 ml ah.
Layli labo hal mid ah. Waxaa ku jira shaambo oo keliya, laakiin sidoo kale xawilaha ayaa ka caawiya ciribtirka maqaarka qalalan bisadaha iyo fududahay in la shanlo dhogorta xayawaanka. Qiimaha baakadka ee Russia waa kala duwan yahay laga bilaabo 130 ilaa 180 rubuc.
Dhibaato wax ku ool ah burburin oo kaliya maaha boodada, laakiin sidoo kale ticks.
Veterinarians waxaa lagula talinayaa inaad isticmaasho shaamboo oo leh buufin ama dhibco si looga hortago dib u soo noqoshada bisadaha.
Waxaa laga helaa 210 ml dhalooyin polymer ah.
Celcelis ahaan qiimaha kala duwan ee ah 100-140 rubuc.
Ka hor inta aadan iibsan shaambo, la tasho khabiiro. Tani waxay tixgelineysaa da'da, xaaladda xayawaanka, iyo sidoo kale heerka infekshanka leh dulin. Talo-bixinta Veterinarian, iyo sidoo kale baaritaan faahfaahsan oo ku saabsan tilmaamaha, waxay kaa caawin doontaa inaadan waxyeeleynin xayawaankaaga iyo inaad ka fogaato soo noqnoqoshada soo noqnoqda leh boodada.